Ramangwana Apple Watch inogona kunge iine moyo wekutarisa. | Ndinobva mac
Apple yaizoshandira Tora Apple Kutarisa kuti ukwanise kutora EKG. EKG, sekuzivikanwa kwayo muchikamu, inotibvumidza kuongorora muviri wedu kuti tione matambudziko emoyo pamberi, sezvakaratidzwa Bloomberg muchinyorwa chakaburitswa nguva pfupi yadarika. Chirevo chinotiudza kuti Apple chishandiso chaizove muchikamu chekuyedza. Sezvineiwo, yaizoona zvinoitwa nemoyo, ichiisa zvigunwe zviviri kumativi ewachi. Mudziyo unoona kurova kwemwoyo, kwakafanana nekuyedza kwemoyo.
Sekureva kwemunhu anobva kusangano:
Iyo vhezheni iri kuyedzwa inoda vashandisi kusvina furemu yeApple Watch neminwe miviri… Inobva yapfuudza isingabatike chipfuva muchipfuva chemunhu kutsvaga maratidziro emagetsi mumoyo uye kuona chero zvakashata, senge zvisina kujairika moyo zviyero.
Zviripachena izvi haisi chinotsiva bvunzo yecologyology kuchipatara, asi zvinogona kuratidza chekutanga kucherechedzwa nezvekuti moyo wedu wakadii panguva ino. Vamwe vashandisi vanoda yakajairwa EKG yekushandisa kwezuva nezuva, uye iyo Apple Watch inogona kubatsira zvikuru.
Nekudaro, sekureva kwechinyorwa cheBloomberg, Apple inogona kutora tekinoroji iyi kana kuibvarura kana isiri iyo chaiyo kana inoshanda. Ngatirangarirei munguva yakapfuura kuti kambani ingadai yaifunga kuisa mashuga metres muApple Watch.
Kunyangwe zvakadaro, iyo mitambo uye hutano nzira yeApple Watch, kuzvitsauranisa kubva kumakwikwi uye kupa wachi wachi musiyano kukosha, chinhu icho Apple inoisa tekinoroji nyowani patafura kumba iyo yainoda kuunza kumusika. Pamwe imwe kambani ine zviwanikwa zvishoma haimuke uye zvinotendwa kuti inoratidza kufarira mune zvehutano izvi. Mumwe muenzaniso pakati pevamwe vazhinji mashandisiro Apple Mwoyo Kudzidza, inoitwa pamwe ne Stanford Chikoro cheMishonga.
Kuti zvirongwa zveApple zviitwe, kuwedzera kune izvo zvehunyanzvi zvinodiwa, inofanira kupasa mvumo yemasangano ekurapa, ayo anoratidza kubatsira kwayo. Saka isu pamwe hatizozviona mumazera mazhinji eApple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ramangwana Apple Watch inogona kunge iine moyo wekutarisa.